Nzira Yokuwana Nayo Yakanaka uye Yakachipa iPad Nyaya | IPhone nhau
Nzira yekuwana yakanaka uye yakachipa iPad makesi
IPad nhau | | Apple zvigadzirwa
Iyo iPad Pro 9,7 yakasvika, uye iine kesi nyowani. Sezvazvinowanzoitika, maPads matsva anoita kuti macase akare asawirirane nezvishoma kwazvo. Kune rimwe divi, isu tinowana rimwe dambudziko rakatonyanya, isu tichine iyo iPad Air 2, ine simba kwazvo uye zvinoshamisa isingadhuri modhi iri kukohwa kutengesa kwakanaka, zvisinei, isu hatigone kuwana iyo yekutanga kesi chero kupi. Usanetseke, MuPadad Nhau tichaenda kukupa mamwe matipi ekuwana akanaka, akanaka uye akadhura anovhara ePadad yako, nekuti isu tinofanirwa kuchengetedza mapiritsi edu nemazvo, nekuti iyo iPad chigadzirwa chinogara kwenguva refu.
Muchidimbu, basa rekutsvaga iro rakakodzera kesi redu iPad rave kunetsa munguva pfupi yapfuura, asi chinhu chekutanga chatinofanira kuzvibvunza ndechekuti Ndeupi rudzi rwevhavha yandinoda? Kana tangojekesa nezve zano iri, tinogona kuenderera mberi nekutenga munzvimbo yedu yatinovimba kana yakanangana newebhusaiti yakadai seAmazon kana eBay, yekutanga ndiyo inonyanya kukurudzirwa neni. Amazon ine huwandu hukuru hwemabutiro emhando dzese nemitengo, uye sekugara uine vimbiso yekuti iyo Jeff Bezos chitoro chinopa, saka gadzirira kuenda kuAmazon kunotsvaga rarasika kesi.
1 Vadziviriri vemberi - Smart Cover
2 Yakazara iPad Makesi - Smart Kesi
3 Basic inovhara chete kumashure
Vadziviriri vemberi - Smart Cover
Munyika yeApple vanozivikanwa seSmart Cover, Iwo mabutiro anotora mukana weiyo magneti chikamu cheiyo iPad kuitira kuti tigadzire keteni repamberi, iro rinozotibvumidza kuisa iyo iPad munzvimbo dzakasiyana. Aya makesi akareruka uye akakurudzirwa, zvisinei, iwo haapi kudzivirira kwakazara kweiyo iPad. Kana kudzivirirwa kwekudonha kuri izvo zvauri kutsvaga, iwe unofanirwa kukanganwa nezvazvo. Iyo Smart Smart Cover inoshanda chete kuchengetedza iyo skrini kubva mukukwesha panguva yekutakura uye sechigadziro cheiyo iPad, hapana chimwezve. Mutengo wacho wakaderera, hongu, uye haina kunyanya kunetsa, asi ine zvayakatadza. Tinogona zvakare kuvawana kubva kuApple chairo, kana nevazhinji vanotsiva kubva kune mamwe mabrand. Nekudaro, kana iri nyaya yeSmart Cover kana tichizonyatsokurudzira Apple's, ndiyo yakasimba uye yakanyatsogadzirwa, iya yemamaki ekutsiva ari kuzokupa iwe misoro yakawanda kupfuura chero chinhu chipi zvacho.
Imwe nzira yekudzivirira yedu iPad kubva kumberi ndeiyi girazi rakakurumbira rakadzikamaDai ivo vaivapo yeiyo iPhone, nei vaisazove varipo veiyo iyo iPad. Tinogona kuvawana muzvitoro zvakakura sePrimark nguva dzose, asi senguva dzose, Amazon ndiyo ichava sosi yedu huru. Tichavawana kubva € 5 kusvika € 15. Isu hatikurudzire kushandisa zvakati wandei pachigadzirwa ichi, sezvo iyo iPad isiri chinhu chinowanzodonhedzwa uye musiyano uripo pakati pemakristaro emimwe mitengo hauna kukosha chaizvo.
Yakazara iPad Makesi - Smart Kesi
Mabutiro akazara akafanana neiyo Smart Cover, ine vimbiso yekuti zvakare vane musana wechinhu chero chipi zvacho chatinosarudza kuchengetedza iPad yedu. Aya ndiwo akanyanya kukurudzirwa, kubva kuApple yeApple, kune chero chinotsiva. Zvigadzirwa JTech uye ESR zvinonakidza, takavaedza uye tinogona kuvakurudzira. Mamwe marondedzero, zvisinei, anowanzo shandisa magineti asina kusimba anoita kuti iyo iPad itsvedze uye usazvigadzire mushe. Naizvozvo, tinokurudzira aya maviri mabhenji kuwedzera kune iyo yekutanga Apple, kunyangwe ichiedza mhando yeiyo ESR kesi yeiyo iPad uye yekutanga Apple, Pamwe ivo havana kukodzera iwo mutsauko we € 60.
Basic inovhara chete kumashure
Isu zvakare tine zvakajairika kumashure zvivharo zvakaita seiyo iPhone, izvi zvakagadzirirwa kuchengetedza chete kumashure kwePadad yedu uye tinovawana vakagadzirwa nezvinhu zvakaomarara kana silicone. Tinokurudzira kuti uvarase, hapana chakafanana nekukwanisa kuisa yako iPad yakatwasuka patafura, uye nekuda kweizvozvo iwe uchada zvifukidzo nemagineti. Izvi zvakachipa, asi hazvibatsire zvakakwana kuti utarise.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Apple zvigadzirwa » Nzira yekuwana yakanaka uye yakachipa iPad makesi